University College London - Isifundo ku: United Kingdom, England
-University College London Yokuxhumana
isifinyezo : UCL
Wasekelwa : 1826
abafundi (ngu.) : 36000
Ungakhohlwa xoxa-University College London
Bhalisa at University College London
UCL yasungulwa ngo 1826 ukuvula up imfundo ephakeme eNgilandi kwabamenyiweyo ukuthi bangafakwa it - eba enyuvesi wokuqala eNgilandi ukuze ngivume abesifazane abafundi amagama alinganayo namadoda 1878.
umsebenzi oncomekayo Academic kanye nocwaningo okhuluma izinkinga wangempela wazise ethos lethu kube yilolu suku nakwa angumgogodla lethu lweminyaka engama-20, UCL 2034.
UCL has academic engcono umfundi isilinganiso in the UK (1:10), olwenza osayizi class amancane futhi esivelele ngamanye ukweseka (Times 2013).
UCL ingenye emanyuvesi phezulu ezimbili in the UK ngesibalo oprofesa, okusho ukuthi abafundi bethu nifundiswa kakhulu abaqeqeshiwe ochwepheshe emkhakheni wabo (Higher Education Statistics Agency 2011).
UCL kudala izimo okukhuthaza abafundi ukuba afune ukuvelela nokho uyiphupho. Ngo 2013 yedwa, abafundi UCL babehlanganyela 41,500 ama-iri wokusebenza ngokuzithandela wamisa 80 amabhizinisi zezenhlalakahle kanye 25 amabhizinisi umfundi.
UCL wakhiwa abantu ephawulekayo: osolwazi ovelele nabafundi ezehlukile; kuboniswane ngawo nomphakathi ochwepheshe kanye lab ochwepheshe, kanye nazo zonke ezinye izingcezu puzzle ezakha enyuvesi ehamba phambili.
I UCL Faculty of Arts & Humanities iyisikhungo esaziwayo ubuhle, lapho locwaningo izinga emhlabeni eholela zonke izinhlelo yokutadisha feeds ngqo.
Abafundi bazuze nobubanzi multi-izigwegwe yokufundisa ezindaweni ezifana IsiZulu, Philosophy, Greek & Latin, Hebrew & Izifundo abangamaJuda kanye ezingaphezu kuka 20 ezilimini zanamuhla European. Izinhlelo ziyatholakala kusuka izikhungo zethu ezihlukahlukene ucwaningo, kanye ubuhlakani futhi iphatha Slade School of Art lesidze, okuyinto njalo kunomthelela izinkulumo ephapheme yobuciko wesimanje, kokubili kuzwelonke nasemhlabeni wonke.
Sihlose sikwazi abafundi ukulandela kuzozizuzisa zezemfundo ihlakulele ngokuhlakanipha futhi uqobo.
UCL Ubuciko & Sciences (Basco)
UCL IsiZulu Ulimi & Literature
UCL European Social & Izifundo Political
UCL Hebrew & Jewish Ucwaningo
UCL Izifundo Imininingwane
UCL School of Izilimi zase-Europe, Amasiko Umphakathi
UCL Slade School of Art lesidze
I Bartlett, UCL sika-Faculty of the Environment eyakhelwe
Thina Bartlett: ubuhlakani UCL lomhlaba wonke imvelo yakhiwe. izigaba zethu span lonke endaweni zokutadisha futhi ucwaningo. ngamunye, bemqhuba amasimu abo. Ngokuhlanganyela, Batfutfukisa nezimpendulo ezintsha ukuze ngokucindezela nezindaba zezwe. Lilonke, abakubonisayo ezweni phambili, ubuhlakani multidisciplinary, bahlanganiswe umoya olukhulu UCL.
Izikole zethu nezigaba ukumboza eyala kusukela izakhiwo nokuhlela, ukuze amandla neningizimu global, futhi ndawonye bakha ubuhlakani UK kunazo oluphelele futhi innovative imvelo yakhiwe.
Sinikeza uhla egcwele nezinhlelo eyakhelwe ensimini imvelo, ama-undergraduate ukuya postgraduate, kanye ngesikhathi MRes namazinga zobudokotela. Siphinde ukusebenzisa uhla izikole ehlobo futhi isisekelo izifundo bayatfutfuka uhlelo esiphezulu imfundo ngoba abaholi esizayo eyakhelwe imvelo ubuchwepheshe.
I UCL Bartlett Centre for Advanced Spatial Ukuhlaziywa
Uphiko UCL Bartlett Ukuhlelwa Kwentuthuko
I UCL Bartlett School of Architecture
I UCL Bartlett School Construction & Ukuphatha iphrojekthi
I UCL Bartlett School of Ukuhlela
UCL Institute for Ukuchuma Global
UCL Institute Ngefa Esimeme
UCL Institute engokuthuthukiswa Resources
UCL Isikhala syntax Laboratory
I UCL Faculty of Brain Sciences uthembisa ucwaningo emhlabeni ehola nokufundisa ezindaweni ziyashiyana kusukela yemizila yezinzwa esetshenziswa ukulawula imisebenzi umzimba (isb. ukuzwa, babone futhi bakhulume) ukuze cognition kanye psychology, enquma ukuziphatha kwabantu.
Thina babhekwa njengabantu abaholi bezwe emadlelweni ethu kanye nomsebenzi wethu uheha abasebenzi nabafundi abavela emhlabeni wonke. I ubuhlakani kanye izingxenye zawo ingxenye simondzawo oluvelele nobungqabavu sokutadisha ucwaningo.
UCL kuyinto ucwaningo Umthombo yaseYurophu e yezinzwa. Thina zibekwa lesibili emhlabeni, futhi wokuqala eYurophu, e yezinzwa nokuziphatha ngu Thomson ISI Essential Isayensi Izinkomba, njengoba kungabantu abangaphezulu kuka kabili izincwadi eziningi nezikhombo njengoba nanoma iyiphi enye inhlangano European. UCL Neuroscience abacwaningi ukukhiqiza phezu 30% lomnikelo wezwe ezincwadini ekhonjiwe kakhulu kakhulu e yezinzwa, ezingaphezu kuka kabili njengoba yimuphi omunye inyuvesi. Ngo neuroimaging kanye Neurology emitholampilo, UCL ukhiqiza 65% futhi 44% lomnikelo UK amaphepha emhlabeni ekhonjiwe kakhulu kakhulu, kahlanu olandelayo eliphakeme UK isikhungo.
I-Faculty of Brain Sciences kanye ikhono of Life Sciences, Medical Sciences futhi Population Health Sciences zihlangana zenze School of Life & Medical Sciences. ISikole ingenye aggregations ngobukhulu futhi ovelele kunayo yonke izifundiswa ensimini yayo futhi unedumela global yokufundisa unolwazi nge ukusika-onqenqemeni ucwaningo. I SLMS Izizinda ku encompass nobubanzi umsebenzi ucwaningo yonkana School ngaphakathi core namaqembu ayisishiyagalolunye. Lolu cwaningo olwenziwe ngokubambisana neminye iminyango UCL futhi kusekelwa ubudlelwano trust yethu NHS, imikhandlu ucwaningo, izinhlangano zosizo kanye umkhakha.
UCL Engineering eletha ucwaningo nokuqeqeshwa yonkana zonke izici ezakha kakhulu ezweni lanamuhla. Ucwaningo lwangaphambili futhi umsebenzi lapha baye bakhiqiza okusheshayo wokugoma productions, ukuxhumana fiber-optic futhi ingqalasizinda inthanethi, futhi siyaqhubeka ukuletha ezintsha emhlabeni ekushintsheni.
abafundi nabasebenzi bethu ethathelwe emhlabeni wonke, njengoba abalingani bethu zezemfundo ibhizinisi. Izinhlelo zethu zokufundisa agxile ezintweni ukuthi zibe nomthelela ezweni elisizungezile, ngenkathi okuqukethwe kwabo uholwa engcono ucwaningo lwamazwe omhlaba. Amalungu ubuhlakani labatawusebentisa emakhono abo yonkana nezikhungo Engineering futhi izikhungo, ngaphakathi UCL, futhi emhlabeni ngobubanzi.
UCL kwamakhemikhali Ubunginiyela
UCL Electronic & Engineering kagesi
UCL Isayensi, ubuchwepheshe, Ubunjiniyela Inqubomgomo yomphakathi
UCL Ezokuphepha & Isayensi Ubugebengu
UCL Isikhungo semfundo
I UCL Isikhungo semfundo isikole emhlabeni ophambili zemfundo nesayensi yezenhlalakahle. Yaqalwa ngo 1902, thina njengamanje unezingaphezulu kuka 7,000 abafundi futhi 1,000 abasebenzi. Singabantu asebenzayo wonke amazwekazi.
Esikhathini 2016 QS amazinga, thina zafakwa wokuqala emhlabeni ngoba imfundo ngoba ngonyaka wesithathu ukugijima, ngaphambi Harvard, Stanford futhi Melbourne. Thina kwanikezelwa Anniversary Prize YeNdlovukazi ngoba Ephakeme iFundo 2014-16 I-"umnikelo inqubomgomo kanye umkhuba imfundo nge ukufinyelela ngamazwe emhlabeni ucwaningo ezintsha zomphakathi" yethu.
Sithole abaqeqeshiwe abangaphezu kuka 10,000 othisha eminyakeni eyishumi edlule futhi ngoJanuwari 2014, sase obonwa Ofsted kubalandeli bethu obuvelele’ kokuqala ukuqeqeshwa uthisha ngazo zonke umbandela yonkana eyinhloko, imfundo yesibili futhi eminye.
Ngo yakamuva Ucwaningo Assessment Ukuzivocavoca, izingxenye ezimbili kwezintathu izincwadi zethu bahlulelwa ukuba omhlaba abalulekile futhi abantu abangaphezu kwengxenye yesithathu bahlulelwa ukuba 'izwe phambili'. Cwaningo eliphezulu yethu yathonya umsebenzi uhulumeni kanye nenqubomgomo ezindaweni kusukela eminyakeni yokuqala waba namalungu imfundo ephakeme futhi zokufunda emisebenzini. Thina ezibekwe kuqala ukuze sithole amandla ucwaningo kwezemfundo e-UK.
Siphinde ngokukhethekile cwaningo nocwaningo e impilo, kwengqondo izifundo longitudinal, phakathi kwezinye izindawo social science. kweqoqo izifundo zethu ezintathu lokuzalwa baye saba nomthelela omkhulu iminyaka eminingi ku inqubomgomo yezempilo, ukulingana ngokobulili kanye nabantu abasha.
IsiTatimende soHlelo lweziFundo, Pedagogy nokuHlola
Amasiko, Communication and Media
Psychology nokuThuthukiswa Human
Ezemfundo, Ziqeqeshe Umphakathi
Faculty of Imithetho
UCL Imithetho ingenye ehola izikole umthetho emhlabeni. It izibophezele azinabo, multi-izigwegwe kanye cwaningo ezintsha umthetho wonke Ubukhulu bayo, nge ngokukhethekile yokuqukethwe komhlaba wonke lapho umthetho usebenza.
ucwaningo top-ukalwe khono sika zinegalelo ibalulekile kakhulu izinga lokufundisa yethu futhi kokuqondisa abafundi bethu. Iphinde kunomthelela ukuthuthukiswa komthetho, ngenkathi ekwakheni practice zomthetho kanye nenqubomgomo yomphakathi.
isizinda sethu London inikeza ithuba omuhle ekudwebeni umnotho umuzi isikhungo UK komthetho, commerce, ezezimali kanye namasiko.
I UCL Faculty of Life Sciences uthembisa ucwaningo emhlabeni ehola nokufundisa, elihlanganisa ebheka namakhono eziyisisekelo wesayensi UCL begazi futhi preclinical. Umsebenzi wethu uheha abasebenzi nabafundi abavela emhlabeni jikelele, futhi ndawonye ukudala indawo evelele nobungqabavu kokubili abafundi nabacwaningi. Khono inalokhu Division of BioSciences, i-UCL School Pharmacy, i-UCL MRC Laboratory ngoba Yamamolekhula Cell Biology kanye Gatsby yezamakhompyutha Neuroscience Unit.
I-Faculty of Life Sciences kanye ikhono of Brain Sciences, Medical Sciences futhi Population Health Sciences zihlangana zenze School of Life & Medical Sciences. ISikole ingenye aggregations ngobukhulu futhi ovelele kunayo yonke izifundiswa ensimini yayo futhi unedumela global yokufundisa unolwazi nge ukusika-onqenqemeni ucwaningo. I SLMS Izizinda ku encompass nobubanzi umsebenzi ucwaningo yonkana School ngaphakathi core namaqembu ayisishiyagalolunye. Lolu cwaningo olwenziwe ngokubambisana neminye iminyango UCL futhi kusekelwa ubudlelwano trust yethu NHS, imikhandlu ucwaningo, izinhlangano zosizo kanye umkhakha.
Faculty of Mathematical & neSayensi
I-Faculty of Mathematical & NeSayensi encompasses okunengqondo, cwaningo zokuhlola kanye zezibalo yomkhathi wethu. ucwaningo Front yomugqa izinhlelo zethu zokufundisa feeds ngqo, futhi abafundi bethu ukuba bazuze ukufinyelela unqambothi izindawo laboratory. Khono inikeza uxhaxha oneminyaka emithathu ye-BSc futhi oneminyaka emine Master's-level degrees MSci ezisafufusa kanye izindawo zendabuko ezingaphezu zezemfundo.
Khono inikeza isisekelo izikhungo eziningana ucwaningo. Lezi lula ngokujulile, ucwaningo imikhakha eyahlukene ngokusebenzisa ukubambisana phakathi ochwepheshe ngaphakathi ubuhlakani, futhi ezindaweni ahlobene e Ubunjiniyela Life Sciences. Khono Ubuye uhlelo ayo kweminyango degree: Natural Sciences.
UCL ISayensi Yemvelo
UCL Isayensi & ubuchwepheshe Ucwaningo
I UCL Faculty of Medical Sciences iletha UCL Medical School futhi eziyisikhombisa yezigaba UCL kanye nezikhungo, udala Umthombo medical ucwaningo zesayensi nokufundisa.
Abasebenzi e khono ucwaningo emhlabeni ehola nokufundisa ezindaweni ziyashiyana kusukela Oncology viral ukuba zezinzwa izicubu isifo futhi impilo yomlomo. I ubuhlakani kanye izingxenye zawo ingxenye simondzawo oluvelele nobungqabavu sokutadisha ucwaningo.
I-Faculty of Medical Sciences kanye ikhono of Brain Sciences, Life Sciences, futhi Population Health Sciences zihlangana zenze School of Life & Medical Sciences. ISikole ingenye aggregations ngobukhulu futhi ovelele kunayo yonke izifundiswa ensimini yayo futhi unedumela global yokufundisa unolwazi nge ukusika-onqenqemeni ucwaningo. I SLMS Izizinda ku encompass nobubanzi umsebenzi ucwaningo yonkana School ngaphakathi core namaqembu ayisishiyagalolunye. Lolu cwaningo olwenziwe ngokubambisana neminye iminyango UCL futhi kusekelwa ubudlelwano trust yethu NHS, imikhandlu ucwaningo, izinhlangano zosizo kanye umkhakha.
I UCL Faculty of Population Health Sciences iletha ubuchwepheshe in Health Ingane, Abesifazane kanye Impilo ezalayo, Population Health, Impilo Global, Trials Clinical, Health Informatics futhi senhliziyo Isayensi. Injongo yalo iwukuba ukuletha ucwaningo oluvelele nokufundisa impilo yomuntu ngcono, kanye umqondo wobunye esaba ukuthi yazisa scholarship yayo nomsebenzi zemfundo kuyinkambo ukuphila.
ucwaningo khono sika elucidates eziphilayo, izinqubo zokuziphatha kanye zenhlalo ezithinta ingqondo ukuthi usebenze yonkana ukuphila komuntu, nakuyo izizukulwane, ezithinta ukuthuthukiswa isifo kwemiphakathi. Lolu cwaningo yazisa undergraduate, postgraduate nokufundisa sokufundela.
I-Faculty of Population Health Sciences, kanye ikhono of Brain Sciences, Life Sciences and Medical Sciences zihlangana zenze School of Life & Medical Sciences. ISikole ingenye aggregations ngobukhulu futhi ovelele kunayo yonke izifundiswa ensimini yayo futhi unedumela global yokufundisa unolwazi nge ukusika-onqenqemeni ucwaningo. I SLMS Izizinda ku encompass nobubanzi umsebenzi ucwaningo yonkana School ngaphakathi core namaqembu ayisishiyagalolunye. Lolu cwaningo olwenziwe ngokubambisana neminye iminyango UCL futhi kusekelwa ubudlelwano trust yethu NHS, imikhandlu ucwaningo, izinhlangano zosizo kanye umkhakha.
UCL Komphakathi & Zomlando Sciences ubuhlakani
I UCL Faculty of Social & Zomlando Sciences limelela indawo yolwazi lapho humanities nesayensi hlangana. Izithakazelo nezindlela yeminyango ayisishiyagalolunye ingxenye zinikeza amathuba amahle kakhulu okwenza ucwaningo ezintsha futhi ngokubambisana.
Ngamunye iminyango has ezinkulu izimfanelo ucwaningo kuyala ayo. Abanye 200 abasebenzi bezemfundo iqhaza ekuthuthukisweni imfundiso yonkana ubuhlakani kanye nemisebenzi yabo ucwaningo kuthiwa kwahambisana labo cishe 100 nabasebenzi bocwaningo. Iminyango futhi ukudlala indima ekulu inethiwekhi UCL sika elikhulayo izikhungo zocwaningo imikhakha eyahlukene.
UCL Institute eMelika
UCL Isikhungo Archaeology
UCL Umlando Art
UCL School kwesiSlavonic & Izifundo East European
UCL yasungulwa on 11 February 1826 ngaphansi kwegama eLondon University alternative yokuziphilisa amanyuvesi benkolo Oxford no-Cambridge. Warden lokuqala eLondon University kwakungu Leonard Horner, owayenguyise Usosayensi wokuqala amabombo eyunivesithi yaseBrithani.
Naphezu inkolelo evamile abantu abanayo ukuthi isazi sefilosofi Jeremy Bentham kwaba umsunguli UCL, acwaninge oqondile lwalulinganiselwe ukuthengwa share No.633, ngemali £ 100 esikhokhwa ayisishiyagalolunye phakathi kukaDisemba 1826 futhi Januwari 1830. Ngo 1828 Wenza ikhethe umngane oyakuhlala umkhandlu, futhi 1827 Uzame ukuba umfundi wakhe uJohane Bowring esimisiwe profesa lokuqala ngesiNgisi noma umlando, kodwa kokubili izikhathi ukhetho yakhe ayizange iphumelele. Lokhu kusikisela ukuthi nakuba kungase kwenzeke ukuthi imibono yakhe waba abanethonya, yena ngokwakhe 'wayeyiNkosi kancane ngakho. Nokho Bentham namuhla ngokuvamile libhekwa njengomthombo “ongokomoya” ka UCL, njengoba imibono yakhe olukhulu ku yezemfundo kanye nomphakathi kwakungamadodana ugqozi abasunguli yesikhungo, ikakhulukazi Scotsmen James Mill (1773-1836) noHenry Brougham (1778-1868).
Ngo 1827, ungusihlalo Umnotho Political eLondon University sidalwe, kanye noJohane Ramsay McCulloch njengoba okulesi lokuqala, esungula omunye neminyango lokuqala ezomnotho eNgilandi. Ngo 1828 eyunivesithi waba ngowokuqala eNgilandi ukunikela isiNgisi njengolimi kuncike nemfundiso Classics nemithi waqala. Ngo 1830, ELondon University wasungula eLondon University School, okuyinto kamuva okwakuzoba yisikhungo University College School. Ngo 1833, eyunivesithi esimisiwe Alexander Maconochie, UNobhala we-Royal Geographical Society, profesa lokuqala lwesifundo e-UK. Ngo 1834, College Hospital University (ekuqaleni Isibhedlela LaseNorth London) wavula njengoba isibhedlela sekufundzisa inyuvesi esikoleni sezokwelapha.
Ngo 1836, ELondon University u ezihlanganiswe Royal Charter ngaphansi kwegama University College, London. Ngosuku olufanayo, University of London sidalwe sisekelo wasebukhosini njengoba degree-Ukuklonyeliswa kokuhlola ibhodi kubafundi ezikoleni abasemaqenjini nasemakolishi, ne-University College futhi College YeNkosi, London kokuba okuthiwa kulo mthetho-sisekelo njengoba eziphethwe ezimbili zokuqala.
I Slade School of Fine Art yasungulwa ngo 1871 kulandela bequest kusukela uFeliksi Slade.
Ngo 1878 University of London yazuza sisekelo zokwenezela okwenza kube eyunivesithi kuqala baseBrithani ukuze bavunyelwe umklomelo degrees abesifazane. Ngawo lowo nyaka, UCL wavuma abesifazane ukuba ikhono Wezobuciko uMthetho Science, nakuba abesifazane lahlala enqatshelwa ikhono of Ubunjiniyela of Medicine (ngaphandle yezifundo empilweni yomphakathi kanye nenhlanzeko). Nakuba UCL uthi kuke kwaba eyunivesithi wokuqala eNgilandi ukuvuma abesifazane emigomeni elilingana amadoda, kusukela 1878, University of Bristol futhi kwenza lesi simangalo, kokuba abesifazane wavuma kusukela esisekelweni salo (njengoba ekolishi) e 1876. Armstrong College, isikhungo owandulela eNewcastle University, abesifazane futhi bavunyelwa ukuba bangene kusukela esisekelweni salo e 1871, nakuba ayikho empeleni babhaliswa kuze 1881. Abesifazane bagcina ungeniswe lokuqeqeshwa phakathi neMpi Okokuqala Umhlaba e 1917, nakuba kokuba impi isiphelile ukulinganiselwa phezu izinombolo zabo.
Ngo 1898, Mnumzane uWilliam Ramsay wathola izakhi Krypton, neon futhi Xenon ngenkathi uprofesa wesayensi yokuthakwa kwamakhemikhali at UCL.
Ngo 1900 University of iLondon yabe kabusha njengoba inyuvesi federal nge izimiso ezintsha ngomumo ngaphansi University of London Mthetho 1898. UCL, kanye nezinye izindawo eziningana lapho amakolishi e-London, waba esikoleni e-University of London. Nakuba iningi izikhungo abamelwe agcinwayo ukuzimela yabo, UCL ukuthi benziwe University e 1907 ngaphansi-University College London (Dlulisa) Mthetho 1905 futhi walahlekelwa uzibuse zomthetho.
1900 futhi wabona isinqumo inhloko ezikhokhelwayo kolishi. Okulesi lokuqala kwaba Carey Foster, owakhonza njengesithunywa Uthishanhloko (njengoba posi osesikhundleni) kusukela 1900 ukuze 1904. Walandelwa esikhundleni Gregory Foster (ongesona isihlobo), futhi 1906 isihloko lashintsha laba Provost ukugwema ukudideka ne Amakhulu University of London. Gregory Foster wasala okuthunyelwe kuze 1929.
Ngo 1906 the Cruciform Isakhiwo wavulwa njengendlela ikhaya elisha le-University College Hospital.
UCL alimala ibhomu eside ngesikhathi seMpi yoMhlaba yesiBili, kuhlanganise eHholo Omkhulu kanye Carey Foster Physics Laboratory. Umagazini umfundi Eyokuqala UCL, Pi Magazine, yanyatheliswa okokuqala ku 21 February 1946. I-Institute of Jewish Izifundo wathuthela UCL e 1959. I Mullard Space Science Laboratory yasungulwa ngo 1967. Ngo 1973, UCL baba isixhumanisi zokuqala zakwamanye amazwe ukuba eyandulela inthanethi, the ARPANET.
Nakuba UCL wayephakathi amayunivesithi okuqala ukuvuma abesifazane ku imigomo efanayo amadoda, e 1878, Igumbi elivamile kolishi abaphezulu, Room Housman, wahlala amadoda kuphela kuze 1969. Emva kwemizamo ezimbili akuphumelelanga waphasiswa ngokunyakaza elaphela ukuhlukaniswa ngu ucansi UCL. Lokhu kwenziwa ngokuba Brian Woledge (Fielden UProfesa IsiFulentshi UCL kusukela 1939 ukuze 1971) noDavide Colquhoun, ngaleso sikhathi womfundisi abasha e kwemithi.
Ngo 1976, umthetho-sisekelo omusha abuyiselwe ukuzimela UCL kwezomthetho, nakuba namanje ngaphandle amandla umklomelo degrees ayo. Ngaphansi kwalo mthetho-sisekelo ekolishi phathelana ngokusemthethweni eyaziwa ngokuthi University College London, baye ngokusemthethweni kwaba “University of London, University College” Kusukela yamiswa ku University. Leli gama belahla ukhefana esetshenziswa igama layo zangaphambilini “University College, London”.
Ngo 1986, UCL ihlanganiswe ne-Institute of Archaeology. Ngo 1988 UCL ihlanganiswe ne-Institute of Laryngology & Otology, Institute of amathambo, Institute of Urology & Nephrology futhi Middlesex Isibhedlela Medical School.
Ngo 1993 Shake up University of London kwakusho ukuthi UCL (nezinye amakolishi) lithole ukufinyelela ngqo ukuxhasa kukahulumeni kanye ilungelo lokuba akunike University of London degrees ngokwabo. Lokhu kwaholela ekubeni UCL kokuba zithathwa njengeziNdawo ezingamaGugu Eqinisweni waseyunivesithi e kwesokudla ayo.
Ngo 1994 University College Izibhedlela London NHS Trust yasungulwa. UCL ihlanganiswe ne-College of Speech Isayensi theInstitute of Ophthalmology e 1995, Institute of Health Ingane kanye School of podiatry e 1996 futhi i-Institute of Neurology e 1997. Ngo 1998 UCL ihlanganiswe ne-Royal Mahhala Isibhedlela Medical School ukudala Royal Mahhala ne-University College Medical School (uqambe UCL Medical School Okthoba 2008). Ngo 1999 UCL ihlanganiswe ne-School kwesiSlavonic futhi Izifundo East European kanye Eastman zamazinyo Institute.
I UCL Jill Dando Institute of Crime Science, uMnyango inyuvesi wokuqala emhlabeni enikelwe ngqo be ukuba ubehlise ubugebengu, yasungulwa ngo 2001.
Iziphakamiso ekubumbaneni phakathi UCL nele-Imperial College London amenyezelwa 2002. Isiphakamiso sokucasuka nokuphikiswa okunamandla okuvela kothisha UCL nabafundi futhi inyunyana AUT, okuyinto wagxeka “the ekubalekeni eziyihlazo yokuntuleka kokubonisana”, okuholela Ukuyekwa kwaso UCL Provost Mnumzane Derek Roberts. I namabhulogi ezasiza ukumisa ekubumbaneni, kuyagcinwa, noma ezinye izixhumanisi manje ngobugebengu: ukubona ibhulogi uDavide Colquhoun sika, kanye kunalokho stylish ngaphezulu Gcina UCL ibhulogi, okuyinto elaliphethwe uDavide Conway, umfundi e-postgraduate eMnyangweni isiHebheru izifundo Jewish.
London Centre for Nanotechnology yasungulwa ngo 2003 njengoba inhlanganisela phakathi UCL nele-Imperial College London.
Kusukela 2003, lapho UCL UProfesa David Latchman baba iNkosi Birkbeck engumakhelwane, uye kokuzihlanganisa ubudlelwane eduze phakathi kwalezi University of London amakolishi amabili, futhi mathupha igcina neminyango zombili. izikhungo zocwaningo Joint zihlanganisa UCL / Birkbeck Institute for Earth yemihlaba Sciences, i-UCL / Birkbeck / IoE Centre for Neuroscience Sikhungo, i-UCL / Birkbeck Isikhungo Structural Biology kanye samangqamuzana ezinto eziphilayo, kanye Birkbeck-UCL Centre for Neuroimaging.
Ngo 2005, UCL wagcina anikezwe siqu amandla wafundisa nocwaningo degree Ukuklonyeliswa balo abangamaphini nalo lonke abafundi entsha UCL bhalisiwe kusukela 2007/08 wakufanelekela ne degree UCL. Futhi in 2005, UCL bamukela yokubeka uphawu entsha yenkampani, ngaphansi kwazo, phakathi kwezinye izinto, igama-University College London kwathathelwa indawo initialism elula UCL kuzo zonke ukuxhumana yangaphandle. Ngawo lowo nyaka omusha £ 422 kwezigidi ezingu isakhiwo ezinkulu kwavuleka University College Hospital Euston Road, i-UCL Indlebe Institute yasungulwa futhi isakhiwo esisha UCL School kwesiSlavonic futhi East Izifundo European wavulwa.
Ngo 2007, i-UCL Cancer Institute kwavulwa eyayisanda kwakhiwa uPawulu O'Gorman Isakhiwo. Ngo-August 2008 UCL kwakhiwa UCL Partners, i academic isayensi sezempilo, Great Ormond Street Isibhedlela Sezingane NHS Trust, Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust, Royal Mahhala London NHS Foundation Trust ne-University College London Izibhedlela NHS Foundation Trust. Ngo 2008 UCL wasungula UCL School of Energy & Resources ku-Adelaide, Australia, campus wokuqala eyunivesithi yaseBrithani kuleli zwe. ISikole lisuselwe mlando Torrens Isakhiwo e Victoria Square kanye indalo yayo kulandela izingxoxo phakathi UCL Vice Provost Michael Worton noNdunankulu weSouth Australian Mike Rann.
Ngo 2009, le Yale UCL ezihlanganyelwe yasungulwa phakathi UCL, UCL Partners, Yale University, Yale School of Medicine Yale - New Haven Isibhedlela. Kuyinto ukusebenzisana ngobukhulu emlandweni noma inyuvesi, nobukhulu bayo uye kamuva linwetshelwe kuya humanities kanye nesayensi yezenhlalo.
Ngo-June 2011, ukuba le nkampani yezimayini BHP Billiton uvumile ukunikela A $ 10 million ukuze UCL ukuxhasa ukusungulwa nezikhungo amabili amandla - Energy Policy Institute, ezinze Adelaide, kanye ne-Institute engokuthuthukiswa Resources, based e-London. Ngo-November 2011 UCL yamemezela zinhlelo okwesikhathi £ 500 million e Bloomsbury campus zako ezisemqoka phezu 10 iminyaka, nokumiswa entsha 23 engamahektare campus eduze Olympic Park in Stratford ku East End yaseLondon. It elibuyekeziwe izinhlelo zayo sokwanda e-East London ngo-December 2014 yamemezela ukwakha campus UCL East isigubungelo 11 esingamahektare futhi ahlinzeke kuze kube 125,000m2 isikhala ku-Queen Elizabeth Olympic Park. UCL East kuyoba ingxenye Olympicopolis kuhlelwe ukuthi ihlele ukuguqula Olympic Park ibe ihabhu kwamasiko kanye emisha lapho UCL kuzovula esikoleni saso sokuqala design, isikhungo engineering zokuhlola kanye Museum of esizayo, kanye isikhala ephilayo abafundi.
Isikole Ikhemisi, Ubuqotho Bombhalo ihlanganiswe ne UCL ku 1 Januwari 2012, eba UCL School Pharmacy ngaphakathi Faculty of Life Sciences. NgoMeyi 2012, UCL, Imperial College London, umsebenzi wenkampani Semiconductor Intel yamemezela ukuhlonywa kwe-Intel ezihlanganyelwe Research Institute for Sustainable Cities Ixhunyiwe, sikhungo ezinze eLondon ucwaningo ku ikusasa emadolobheni.
Ngo-August 2012 UCL wathola ukugxekwa ngoba bememezela isikhundla ucwaningo ezingakhokhwanga; ke kamuva walihoxisa isikhangiso.
UCL kanye Isikhungo semfundo wakha ubuhlobo zamasu ngo-Okthoba 2012, kuhlanganise nokubambisana ekufundiseni, ucwaningo kanye nokuthuthukiswa London izikole uhlelo. Ngo-February 2014 the izikhungo ezimbili yamemezela inhloso yabo ukuze uhlangane kanye nokuhlanganiswa laqedwa ngo-December 2014.
Ngo-October 2013 kwamenyezelwa ukuthi Translation Studies Iyunithi Imperial College London uzodlulela UCL, ekubeni ingxenye UCL School of Izilimi zase-Europe, Amasiko Umphakathi. Ngo-December 2013, kwamenyezelwa ukuthi UCL kanye zezemfundo inkampani ukushicilela Elsevier ngeke sebenzisana ukusungula UCL Big Data Institute. Ngo-January 2015 kwamenyezelwa ukuthi UCL lase likhethiwe uhulumeni UK ukuba ngomunye amalungu amahlanu umsunguli we-Alan Turing Institute (kanye amanyuvesi yaseCambridge, Edinburgh, Oxford futhi Warwick), i sikhungo wawuyomiswa at iBritish Library ukuba kwenyuswe ukuthuthukiswa kanye nokusebenzisa izibalo zezinga eliphezulu, isayensi yekhompyutha, algorithm futhi Big Data.
Ngo 2015 UCL wasungula School entsha Ukuphathwa igxile ubuchwepheshe, kabusha kanye nomoya webhizinisi, esikhundleni uMnyango yayo Management Science Nokusungula. Lwamenza Komunye Canada Square, Canary Wharf ngoMeyi 2016.
Uyafuna xoxa-University College London ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
-University College London kumephu
Izithombe: University College London Facebook ezisemthethweni
-University College London Izibuyekezo
Joyina ukuxoxa-University College London.